Keflor (ကပ်ဖ်လော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Keflor (ကပ်ဖ်လော)
Keflor (ကပ်ဖ်လော) ကဘာလဲ။
Generic Name: Keflor (ကပ်ဖ်လော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Keflor (ကပ်ဖ်လော) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
KEFLOR® သည်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘက်တီးရီးယားပိုးကောင်များဒ ဆဲလ်နံရံကိုဖျက်ပစ်ခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယားများ၏ကြီးထွားမှုမဖြစ်အာင်လုပ်သော ဆေးဖြစ်သည်။KEFLOR®(CEFACLOR)သည် ကူးစက်ရောဂါများအတွက်အများဆုံးသုံးသော၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Keflor (ကပ်ဖ်လော) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
KEFLOR®ကို အစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ အစာမရှိဘဲဖြစ်စေသောက်နိုင်သည်။
ဆေးကို မမြိုချမီ သေချာစွာ ဝါးပါ။
ရောဂါအမြစ်ပြတ်ရန် ဆေးပတ်ပြည့်အောင်သောက်ပါ။ နေကောင်းသွားသော်လည်း ဆေးမဖြတ်ဘဲ ဆေးပတ်ပြည့်အောင်သောက်ပါ။
ဆေးကို နေ့စဉ် အချိန်မှန်မှန်သောက်ခြင်းသည် ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ဆေးသောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
Keflor (ကပ်ဖ်လော) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ KEFLOR®ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ KEFLOR®
KEFLOR®ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
KEFLOR®ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Keflor (ကပ်ဖ်လော) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
KEFLOR®ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် cephalosporin ပိုးသတ်ဆေးများ(ဥပမာ- Cephalexin)နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစာအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း၊သွေးခဲမှုမူမမှန်ခြင်း ဖြစ်နေလျှင်
Penicillin ပိုးသတ်ဆေး (ဥပမာ- Amoxicillin)သို့မဟုတ် အခြားသော beta-lactam ပိုးသတ်ဆေးများ(ဥပမာ- Imepenem)နှင့် ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Keflor (ကပ်ဖ်လော) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
သင်သည် ကလေးယူရန်စီစဉ်နေပါက ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Cefaclor သည်နို့ရည်ထဲတွင် ပါနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်ပါက ဆေးသောက်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Keflor (ကပ်ဖ်လော) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
KEFLOR® သည် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Keflor (ကပ်ဖ်လော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
KEFLOR®ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Probenecid သည် KEFLOR®၏အာနိသင်နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေသည်။
Wafarin သွေးခဲပျော်ဆေးသည် KEFLOR®၏အာနိသင်နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေပြီး သွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Keflor (ကပ်ဖ်လော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
KEFLOR®က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Keflor (ကပ်ဖ်လော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
KEFLOR®ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Keflor (ကပ်ဖ်လော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူကြီးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသောဆေး ပမာဏမှာ ၂၅၀ မီလီဂရမ် ၈နာရီခြား ဖြစ်သည်။
နမိုးနီးယားကဲ့သို့ ပိုပြင်းထန်သော ကူးစက်ရောဂါများအတွက် နှစ်ဆတိုးပြီး သောက်နိုင်သည်။
KEFLOR® ၂၅၀ မီလီဂရမ် တနေ့ ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ်သောက်ပါ။
အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Keflor (ကပ်ဖ်လော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူကြီးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသောဆေး ပမာဏမှာ တနေ့လျှင် ၂၀ mg/kg/day ၈နာရီခြား ဖြစ်သည်။
နားပြည်ယိုခြင်းနှင့် ပိုပြင်းထန်သော ကူးစက်ရောဂါများအတွက် တနေ့လျှင် ၄၀ mg/kg/day သောက်နိုင်ပြီး အများဆုံး ၁ ဂရမ် အထိသောက်နိုင်သည်။
Keflor (ကပ်ဖ်လော) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
KEFLOR®ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂၅၀ မီလီဂရမ် ဆေးတောင့်
KEFLOR®ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Keflor®. http://www.healthplus24.com/drugs/cefaclor/Keflor-250-mg-capsule.aspx.Accessed November 23, 2016
Cefaclor. https://www.drugs.com/cdi/cefaclor.html.Accessed November 23, 2016.